OROMOON MIRGA BUBUUTUDHAAN SOSSOBAMEE QABSO MIRGA ABBAA BIYYUMMA EEGALE YOO KAN LAAFFISU TA’E BADII GUDDAATU ISA EGGATA Sanyii Namaa – Beekan Guluma Erena
OROMOON MIRGA BUBUUTUDHAAN SOSSOBAMEE QABSO MIRGA ABBAA BIYYUMMA EEGALE YOO KAN LAAFFISU TA’E BADII GUDDAATU ISA EGGATA Sanyii Namaa	Beekan Erena
Politics Category October 6, 2016Oromo Protests
1SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
OROMOON MIRGA BUBUUTUDHAAN SOSSOBAMEE QABSO MIRGA ABBAA BIYYUMMA EEGALE YOO KAN LAAFFISU TA’E BADII GUDDAATU ISA EGGATA
Uummatnni Oromo qawween caalamuun gabrumma jalatti eega kufe calqabee hanga guyyaa har’aatti falmmii mirga abba biyyummaa isaatiif godhu takkumaa dhaabe hinbeeku. Qabso hadhaa’a wal’ irra hincinne uummatnni kun gochaa har’a ga’e keessatti ijoolleen isaa qaqqaaleyyiin kumaatamaan lakkaaman lubbu dhabaniiru. Wareeggamnni kafalaman haaheddummatan malee injifannoon argaman salphaatti kan ilaalaman miti.
Injifannoole argaman kanaaf hangafootnni waijaarani qabsso bilisumma Oromo eegalan seena qabsso uummata Oromo keessatti brabaraan iddo guddaa qabaatu. Dhaloonni har’aa wareegama isaaniitiin injifannoolee qabssaa’otnni hangafootnni argamssiissan irratti hundaa’uun abbaa biyyumaa uummata Oromo dhugoomssuun qabsso eegalame galmmaan ga’uuf itti gaafatama seena fiixaan baasuuf sochi boonssaa gochaa jira. Qabssoo hadhaa’a har’a godhama jiru keessatti wareegamnni uummatnni Oromo guyya guyyaan kafalaa jiruuf injiffannoon argamaa jiran qabssoon uummata kana adunyyaan ajaa’ibssiifata jira. Har’a kan nun beeknne nu baree jira. Diinni qawwee isaa abddate rasaasa uummata kannatti roobsse uummata qawwee hinsodaanne, uummata qawweef hinjilbbeeffanne ofitti horee waan qabatuuf lafa of kaa’u wallaala jira.
Haata’u malee diinni Oromo akkuma hanga har’atti argine amala hinjijjiiramnne tokko qabu. Falmmiin uummata yeroo itti cimu, gaaffi dhihaatan hunduma waan fudhatan of fakkeessuun Oromo eega harka laachisanii booda yeroo bitatanii deebi’anii qabsso kolaasanii qabssaa’ota keenya dhabamssiisu. Diinni har’a dache Oromiya dhuunffate jiru kunis caasa badii ittiin raaw’atu Oromiyaa keessatti ijaarrate, qawwee hidhate, siyaasa fi dinagddee Oromiyaa irratti abbaa of taasisee aangome jira. Hanga caasi diinni Oromiyaa keessatti ijaarratte, olaantummaan inni gama hundaan tolffate dhabamssiifame abbaan biyyumma Oromo guutummaatti mirkanaa’utti gama diinaatiin kan dhihaatan yaada kamiiniyyu keessumssiisuun qabsso adeema jiru laaffisuun balaa gudda Oromootti fida.
Akka dhagahamutti, mee waa’ee afaan Oromo afaan hojii taassisu haa ilaallu. Hanga dacheen Oromiyaa to’anna humnna waraana Wayyaane jala jirutti eessaatti afaanni Oromo hojii irra oola. Maaynni wabiin isaa?Diinni hanga Oromiyaa keessa haxaa’ame ba’utti mirgi afaani gatii hinqabu. Mirgi afaani dache irratti dubbattu oso hinto’atin wabii qabaachu hindanda’u. Mirgi afaani mirga abba biyyummaatiin adda bahe hinilaalamu.
Waa’ee Finfinnes yoo ta’e hanga Wayyaaneen guutummaa Oromiyaa dhuunffatte jirttutti hanga abbaan biyyumma Oromo guutummaatti hinmirkkanoofnnetti, akkuma kanaan dura arggine waan har’a kenname bor deebi’ee fudhatmau ta’a. Isheen aango hunduma of harkkatti qabatanii qawwee baatanii araara, nagaa jedhani HINSOBU YAA MARQQA SI AFUUFUUN SI LIQIMSSUUF isa jedhan sana ta’a. Inni biraa caasi Wayyaaneen qabeenyya Oromiyaa ittiin dhuunffachuuf, toachuuf ijaarratte hanga hindiigamnetti mirgi Oromoon qabaatu hanqu/hit’uu taati. Hanga Wayyaaneen olaantumma gama siyaasa, dingadde fi, waraanaa Oromiyaa keessatti qabdu guutummaatti uummata Oromootti laattee dache Oromiyaati baatutti qabssoo finiinssu malee filmmaata biraa tokkollee hinqabnnu. CAASAALEEN SIYAASA (OPDO), KAN DINAGDE (BUSINESS) FI WARAANA WAYYAANE GUUTUMMAATTI DIIGAMANII KAN OROMOON IJAARRATEEN BAKKA BUUFAMU QABU.
Wayyaaneen nu ajeesu oso hindhaabin, mirga bubuutuun nu sossoba bira tartte yaali isheen gootu karaa lukkeelee ishee jaarmolee Oromo gidduutti garagarumma uumuuf babal’isuu ta’u danda’a. Qaawwa isa kana cufachuun dirqama keenya. Ammas (horizontally) wal tumssu uummata Oromoof Amaara giddutti uumamee jabaachaa jiru diiguu Wayyaaneen kan isheen irratti qiyyeeffattu ta’a. Oromoon kana beekuun qaawwaa isa kanas cufu qaba.
Tarii Wayyaaneen farajiinille jaarssumma ergachu yaalii gochu danddeessi. Nuti kan nuti ilaalu qabnnu lubbuu Oromoota rasaasaa Wayyaaneen dhume, dhiiga Oromo akka dhiiga saree dhangala’e baddaaf gamoojji Oromiyaa keessa ammallee iyyaa jiru. Ammallee Oromoon kumaatamaan lakkaa’amu kabaja dhabe mana hidhaa keessatti haqa dhabee ibiddaaf rasaasaan waadamaa jira. Diina hamttu hammeenyyi ishee daanga hinqabnne akkaWayyaane waliin Oromoon jaarsumma taa’u hinqabu hindanda’us. Faranjii yoo ta’e bara Impaayerattiin kun uummamtte calqabe hanga har’aatti gabroomffata waliin Oromo cabssu malee mirga Oromotiif takkaa falmmanii dhaabbataniis hinbeekani.
Kanaafu uummatnni Oromo mirga abbaa biyyumma diinni isa sarbe karaa ofi isaaati fedheen hanga guutummaatti harkkaan ga’atutti eenyyuunillee yoo ta’e amanee, sossobamee qabsso finiinssa jiru dhaabu hinqabu.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa1SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← LEADERSHIP: NOW OR NEVER Sanyii Namaa’tiin
THE GENOCIDAL MASSACRES OF OROMOS AT THE IRREECHAA FESTIVAL: THE LIES OF THE TIGRE-LED ETHIOPIAN GOVERNMENT Asafa Jalata, PhD The University of Tennessee →